Ny hetsiky ny olom-pirenena Seychelles dia maniry ny hampijanonan'i India
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny hetsiky ny olom-pirenena Seychelles dia maniry ny hampijanonan'i India
Tamin'ny fivoriana natao ny talata 20 febroary lasa teo, dia nisy olom-pirenena Seychellois voakasik'izany izay nanao fihetsiketsehana isaky ny asabotsy teo amin'ny tilikambo famantaranandro nanohitra ny fankatoavan'ny governemanta ny tobin'ny tafika Indiana ao amin'ny Nosy Assump, dia tapaka fa hiara-hiangona ireo olona ireo. amin'ny anarana ofisialin'ny Save the Aldabra Island Group (SAIG) ho an'ny ezaka mitambatra hanohitra ny tetik'ady miaramila.
Anisan'ireo Seychellois izay nanangana komity hampiato ny tafika Indiana dia tsy iza fa ny minisitry ny fizahantany teo aloha ho an'ny firenena, Alain St.Ange. Tamin'ny 15 Febroary 2018 eTurboNews lahatsoratra, Hoy ny minisitra teo aloha St.Ange tamin'i India: Manalavira ireo vondron'ireo nosy Aldabra. Ny talen'ny tarika dia Andriamatoa Terry Sandapin, ampian'Andriamatoa Allen Houareau sy Andriamatoa Raoul Rene Payet.
Ny fandaharam-potoanan'ny vondrona dia tsy manao politika loatra, ary noho izany dia manasa ny olom-pirenena Seychellois rehetra hanatevin-daharana amin'ity tanjona mendrika ity mba hamonjy ny vondron'ireo nosy Aldabra amin'ny tobin-tafika mampidi-doza sy tsy misaina. Ny Aldabra Atoll dia ahitana nosy haran-dranomasina efatra lehibe izay mifono lagoon marivo. Ny vondron'ireo nosy dia voahodidin'ny haran-dranomasina. Noho ny fahasahiranan'ny fidirana sy ny fitokanan'ny atol, Aldabra dia voaro amin'ny fitaoman'olombelona ka mitazona sokatra goavambe 152,000 eo ho eo, mponina lehibe indrindra eto an-tanety. Aldabra dia iray amin'ireo atoll lehibe indrindra eto an-tany ary misy iray amin'ireo toeram-ponenana voajanahary manan-danja indrindra amin'ny fandalinana ny fizotry ny fivoarana sy ny tontolo iainana.
SAIG dia mino ny politika "sariaka amin'ny rehetra ary tsy misy ifandraisany na amin'iza na iza" ary manohitra tanteraka ny miaramila amin'ny tanindrazany, na inona na inona fahefana vahiny, indrindra fa nokleary. Ankoatr'izay, ny tobin'ny miaramila izay manakaiky ny tranokala UNESCO voajanahary voajanahary sy ny harena biolojika toa an'i Aldabra dia tsy azo ekena tanteraka amin'ny fomba fijery fiarovana ny tontolo iainana, tontolo iainana ary tontolo iainana.
Ny SAIG ​​dia mangataka amin'ny governemanta ambanin'ny “Lalàna fidirana malalaka amin'ny fampahalalam-baovao” sy ny zon'ny olom-pirenenan'i Seychelles hahafantatra ny antsipirian'ny tetik'asa miaramila lehibe natolotry ny habe sy ny lanjan'ny firenena misy ifandraisany amin'ny herin'ny nokleary vahiny ao amin'ny faritaniny, hamoaka ny MOU sy ny pitsopitsony rehetra mifandraika amin'ity toby miaramila ity.
Mino ny SAIG ​​fa ny tetik'asa ifaninanana tahaka izany dia tokony hotapahina farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny fomba demokratika amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Ankoatr'izay, ny SAIG ​​dia miantso ny mpikambana rehetra ao amin'ny Antenimieram-pirenena (NA) hifidy ny fanoherana ny fifanarahana ara-tafika nosoniavina teo amin'ny governemanta Seychelles sy ny an'i India rehefa tonga eo amin'ny NA ny volavolan-dalàna hanaovana ratification.
Efa misy ny tsaho tsy mbola voamarina amin'ny famoahana ampahibemaso fa mpiasa IDC 6 ao an-toerana amin'ny Nosy Assump dia nomena famporisihana ara-bola hampodiana any amin'ireo nosy hafa ary efa misy ireo mpiasa indiana manao fanamboarana any amin'ny nosy ary efa natomboka ny fananganana toby miaramila. Ny SAIG ​​dia mangataka amin'ny governemanta mba hanazava ny fomba efa an-dàlam-pamolavolana ilay tetikasa na dia talohan'ny fankatoavana farany nataon'ny Antenimieram-pirenena aza.
Ny mpikambana ao amin'ny SAIG ​​dia hametraka raharaha eo amin'ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana tsy ho ela mba hifaninana amin'ny ara-dalàna araka ny lalàm-panorenana amin'ny fomba nampiharana ny fifanarahana iray manontolo tamin'ny olom-pirenena Seychellois.